Qabsoo sabni guddaan jijjiirama fideen Yartuun gootota keetitti taphattu kana Qeerroon osoo xumura itti goone. – Kichuu
Wareegama xiqqaan hayyoota teenna wareegama jalaa haa baraarru. Filannoo osoo hin taane filannoon inni jalqabaa Fincila Xumura Gabrummaan FXGn hayyoota teenna baafatuudha. Tarsiimoo haaraya dadhabnu Tarsimoo kaleessa Jawar baasen haa fayyadamnu. Ammatti hiriiraa guutuu Oromiyaatti goone hayyoota teenna baafanna kuni carraa isa jalqabaati, isa dadhabnu karaa naannoo teenna keessa deemtu uggurree sochii dhooggina hayyoota nuuf jecha qooqan, hidhaan rakkattu baraarra.
Dhimmoonni biroo ni dhaqqabu.
Qeerroo falli maali hayyoonni teenna wanna hin taane keessa jirti.
Dubbiin akka naanno keessa burraqun ummata nagaa qawwen ajjeesan miti,dubbiin akka qote bulaa irratti mana gubanii miti,lolli akka dhirsa hidhanii niiti gudeedanii miti. Akka barata harka duwwaa jiru rasaasan mataa facaasani miti. Poolisin Shimallisi fi Damballash gaafa WBO sakatta’uu bosona dhaqanii qabaman akka illeetti gurra dhaabani ta’u kunoo qawwee kennani. Dhirsi dhirsaa qaba ciisa urjii lakka’a!
Hidhaafi ajjeechaa sodaannee dantaa uummata Oromoo dabarsinee hinkenninu jedhee falmaa ture. Sagalee jaallan mana hidhaa ta’ees hedduu qabsaa’aa ture. Gootni kun har’a balleessaa isaa malee mana hidhaatti gaargalaa jira. Raqaaf jecha warra haqa dabsaniif Waaqi qalbii kenninna!!!
አሻጥሬን ያቺን ካባ ደርበውለታል ነጋቲ
Hardha barattootii mana barumsaa qophaa’innaa Yaaballoo hiriira mormii baanaan , barataan tokko ajjeefame jedhan.
Akka odeeffanneetti barataa Huqqaa Dabbasoo Adii humna poolisii Oromiyaatin du’e. Barattootii hedduun ammoo hospitaala Yaaballootti yaalamaa jirti.
Abbootii qabeenya Oromoo kan akkka Dinquu Dayyaasa hari’a biyya baase, hogganoota Oromoo mana hidhaatti dararaa #nafxanyaaf garuu warshaa Zayitii gandaa keessa deemee eebbisaf.